Amin'ny vanim-potoana taorian'ny valan'aretina, mifantoha amin'ny fironana vaovao amin'ny tsihy fiara
Ny fipoahan'ny COVID-19 tamin'ny taona 2020 dia nanery ny tanàna hanindry ny bokotra fiatoana. Taorian'ny fiainana an-trano lava sy vaovao tsy tambo isaina momba ny ady amin'ny valan'aretina, ny tsirairay dia manana eritreritra sy fahatakarana vaovao momba ny fiainana sy ny fiainana. Eo koa ny fiheverana bebe kokoa ny fahasalamana.
Ny fiara no "trano faharoa" an'ny mpanjifa, ary ny fahasalaman'ny akoran'ny tsihy no mamaritra ny kalitaon'ny fiainan'ny olona.
Taorian'ny fipoahan'ny COVID-19, na ny olana amin'ny fofona fiara efa ratsy hatry ny ela na ny olana amin'ny fanadiovana ny rivotra, dia lasa nifantohan'ny sain'ny mpanjifa ihany koa ny bakteria sy ny anti-virus. Ireo dia ho lasa làlana vaovao mamaky ny "mats fiara mahasalama sy sariaka tontolo iainana".
Na dia nihena aza ny valanaretina, dia nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiainantsika izany: amin'ny lafiny iray, nanjary matotra tsikelikely ny fahatsiarovan-tenan'ireo mpanjifa. Talohan'ny valan'aretina dia tsy niraika firy tamin'ny lafiny maro ny tsirairay. Ny ankamaroan'izy ireo dia tsy nijery afa-tsy ny marika sy ny endrika "hita maso". Ireo mpanjifa amin'ny "vanim-potoana taorian'ny valan'aretina" voakasiky ny valan'aretina dia nanomboka nanana fepetra takiana amin'ny "lafin-javatra tsy hita maso" toy ny fiarovana sy ny kalitao. Etsy ankilany, ny foto-kevitry ny dia mahasalama dia miorim-paka ao am-pon'ny olona. Ankoatry ny fanesorana ny sarontava, ny fitondrana fiara tsy miankina iray dia lasa fahazarana mandeha mahasalama ho an'ny olona maro.
Araka ny fanadihadiana nataon'ny Cox Automotive, ny ampahatelon'ny tompona fiara dia handinika ny "kalitaon'ny rivotra" amin'ny fiara rehefa mividy fiara amin'ny ho avy. Raha raisina ny fiakaran'ny vidin'ny tsena amin'ny ho avy dia tsikaritray fa mihamaro hatrany ny mpanjifa liana amin'ny fitaovana famonoana fiara miady amin'ny bakteria. Ny fampiasana fitaovam-piadiana tsy misy poizina, tia tontolo iainana ary bakteria ho an'ny tsihy fiara dia fironana ankapobeny amin'ny fiantohana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny fiara amin'ny vanim-potoana taorian'ny valan'aretina.
Tamin'ny fiandohan'ny fananganana marika dia nino ny DEAO fa ny fiarovana ny tontolo iainana no fepetra takiana voalohany amin'ny fahatsapana ny sandan'ny tsihy fiara aorian'ny tsena. Indrindra amin'ny vanim-potoana manokana taorian'ny vanim-potoanan'ny valan'aretina dia nampiakatra ny fikatsahana ny fiarovana ny tontolo iainana, fiarovana ny tontolo iainana, fahasalamana ary fiarovana amin'ny ambaratonga mbola tsy nisy toy izany.
Amin'ny fo tontolo iainana dia manolo-tena amin'ny fahasalaman'ny tsihy fiara izahay.
Mats gorodona fiara nentim-paharazana mampiasa fitaovana spaonjy spaonjy. Ny spaonjy dia vokatra simika izay mihosotra mivantana avy amin'ny TDI benzene, cyanide, foaming agents ary zavatra simika hafa.
TDI dia simika misy poizina be izay tsy sariaka amin'ny tontolo iainana mandritra ny dingam-pamokarana. Ho fanampin'izany, mamoaka akora misy poizina sy mahasosotra izy mandritra ny fampiasana azy, izay manimba ny lalan-pisefoana ataon'ny olombelona ary miaraka amin'ny risika homamiadana. Vokatra voarara mandritra ny Lalao Olaimpika.
Miaraka amin'ny firafitry ny tantely ny spaonjy, ny fikambanana dia tery sy mahavotra. Raha vao tafiditra ao anaty tsihy fiara spaonjy ny rano dia tsy mora maina izany, ary mora ny mitazona loto ary lasa toeram-piterahan'ny bakteria.
Deao TPE mats fiara sariaka amin'ny tontolo iainana mamakivaky fitaovana nentim-paharazana, mampiasa fitaovana TPE fiarovana tontolo iainana vaovao eken'ny mpivarotra fiara avo lenta izy io, azo antoka sy tsy misy poizina, tsy misy akora manimba toy ny formaldehyde sy toluene, manana fahombiazana milamina ary mahomby mamaha ny olan'ny fanamafisana ny rano sy ny hamandoana.
Manomboka amin'ny tsihy fiara azo ampiharina ka hatrany amin'ny tsihy fiara tsara tarehy ka hatrany amin'ny tsihy fiara mahasalama dia fironana tsy azo ihodivirana amin'ny fivoaran'ny landy tongotra io, ary io koa ilay foto-kevitra momba ny lanjan-marika efa notadiavinay.